आधुनिक गीतिसंग्रह ‘फूल झैं जीवन’ विमोचन, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आधुनिक गीतिसंग्रह ‘फूल झैं जीवन’ विमोचन
काठमाडौं । संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठ र गीतकार प्रेम प्रसाद राजभण्डारीको संयुक्त गीतिसंग्रह ‘फूल झैं जीवन’ सार्वजनिक भएको छ। वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त एल्बम सार्वजनिक भएको हो।
कार्यक्रममा गजलकार डा.नेत्र एटम, गीतकार नेपालका महासचिव शुभ मुकारुङ, प्राज्ञ ज्योतिप्रकाश, सांसद सुजिता शाक्य, सांसद विष्णु शर्मा लगायतले ‘फूल झैं जीवन’ लाई सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दै संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठले प्रेम प्रसादसँगको पछिल्लो सहकार्यले ‘फूल झैं जीवन’ निर्माण हुन सफल भएको बताए।
गीतकार राजभण्डारी प्रवास बसे पनि गीतसंगीत भने नेपालकै माटोसँग मिलेको बताउँदै श्रेष्ठले उनका सिर्जना संगीत गर्दा पहिलोजस्तो नभएको बताए।
फूलझैं जीवनको एल्बम समीक्षा गर्दै डा.नेत्र एटमले आफ्ना दुई विद्यार्थीले सिर्जना गरेको एल्बम विमोचन गर्न पाउँदा खुशी भएको बताए। उनले गीतकार प्रेम प्रसादको सिर्जना सुन्दा निकै नै गहिराईमा डुबेर लेखिएको पाएको बताए। त्यसैगरी सांसद सुजिता शाक्यले एल्बमको सफलताको शुभकामना दिँदै गीतसंगीत बिना मानिस निरस हुने बताइन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानले संगीतकार श्रेष्ठको संगीतको प्रशंसा गर्दै सबैले गुनगुनाउन सक्ने गीत नै सफल हुने बताए। गीतकार शब्दअनुसार सबैलाई गुनगुनाउन सक्नेगरी गरिएको गीत सुन्दा आफू पहिलेकै अवस्थामा फर्केको जस्तो अनुभूति भएको गायक प्रधानले बताए।
कार्यक्रममा गायक भविन ढुंगाना, गायक कृष्णभक्त राई र गायिका सहिमा श्रेष्ठले गायन प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमलाई समापन गर्दै गीतकार राजभण्डारीले आफूले प्रवासमा रहँदा धेरै कापीका पाना कोरेर सकेको बताउँदै एउटा गीत रेकर्डका लागि संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठलाई दिएपछि अब गीत लेख्न सक्छु भन्ने लागेको भन्ने अनुभव सुनाएका थिए। कार्यक्रम पत्रकार सुमन बैरागीले सञ्चालन गरेका थिए।
फूलझैं जीवनभित्र ६ वटा गीत समावेश गरिएको छ। गोल्डेन क्रियशनले बजारमा ल्याएको उक्त एल्बमभित्र देखेको थिएँ, बृद्ध विहिन लुम्बिनीमा, पुन्य भयो, माया प्रिति, विगुल फुक्ने, जवानीको रसरङ्गमा जस्ता गीत समावेश गरिएको छ। जसमा भविन ढुंगाना, रामकृष्ण ढकाल, कृष्णभक्त राई, मेलिना राई, मनोजराज, सहिमा श्रेष्ठले स्वर दिएका छन्।